Waa sidee galmada gabdhaha aan la gudin? | Raganimo University
Waa sidee galmada gabdhaha aan la gudin?
February 5, 2019~1 minute
Waxaa cilmi baaris la sameeyay lagu ogaaday in 98% dumarka soomaalida la guday. Kaasoo isugu jira firicooni iyo sunni balse way yaryihiin dumar Soomaali ah oo aan guud ahaan la taaban. Taasi ayaa macnaheedu yahay in ragga Soomaalida inta badan aysan waligood u galmoon gabadh aan la gudin. Hadaba waa sidee dareenka galmada gabdhaha aan la taaban?
Waxaa la isku raacsanyahay in gudniinku uu yahay dhibaato lagu sameeyo gabdhaha Soomaalida, taasoo ujeedkiisu yahay in lala dagaalamo kacsiga ilaahay ku abuuray gabdhaha ee dabiiciga ah. Sidaa darteed ayaa gabdhaha aan la gudin waxay ka dareen iyo kacsi badanyihiin kuwa la guday. Ninka u galmoonaya gabadha aan la gudin ayaa dareemaya galmada dabiiciga ah ee ilaahay ugu talo galay bani'aadamka.
Dumarka aan la gudin ayaa qaasatan aad ugu fiican leefida. Gabadha la guday ee laga jaray kintirka ama la dhaawacay kintirkeeda ayaan si aad ah ugu raaxaysaneyn leefida. Iyadoo laga yaabo in ayba ceeb u aragto in ninku uu afka la galo gudaheeda. Gabdhaha kintirka leh ayaa aad u jecel in ninku uu carabkiisa iyo bushimiisa ku dhuuqo kintirkooda.
Sidoo kale gabdhaha aan la gudin ayaa ka sahlan in ay biyo baxaan kuwa kale. Sababta ayaa ah in dareenka kintirka oo dhameystiran uu ku xiranyahay gabadhaan. Ninka u bartay galmada gabdhaha aan la gudin ayay ku adkaaneysaa in luu la qabsado kuwa la guday.